‘संसद विघटन भएको छैन, सभामुखले बैठक सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ’ – साँचो खबर
‘संसद विघटन भएको छैन, सभामुखले बैठक सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ’
काठमाडौं । संसद विघटनको गर्ने सरकारको निर्णयका सन्दर्भमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल समूहसहितका शीर्ष नेताले आज कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालत जाने गृहकार्य अगाडि बढाएका छन् ।
छलफलपछि राष्ट्रियभा सदस्य तथा कानुन विद रामनारायण विडारीले संसद विघटनको हल्ला मात्र चलेको बताए । ‘संसद विघन भएको हल्ला चल्यो । राष्ट्रपतिले पनि भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो । तर हाम्रो संविधानले भनेन । संविधानले नभनेको कुरा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने अधिकार कहाँबाट आयो ? अन्य देशमा अध्यास छ भनेर नेपालको संविधानको ब्याख्य गर्ने ?,’ उनको प्रश्न छ ।
उनका अनुसार नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन । विडारीले भने, ‘संसद विघटन भएको छैन । संसद विघटन नभएको हुनाले आउने १७ गते यसको अधिवेशन राष्ट्रपतिले बोलाइ सक्नुपर्ने छ । नबोलाउनु भयो भने सभामुखले संसद बैठक सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ । वैधानिक रुपमा जान सक्छ ।’
संसदलाई विघटन गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको विषयमा कानुन विज्ञ र सांसदको रायमाथि छलफल भएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले निर्णय फिर्ता नलिने अडान राखेकोबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले निर्णय फिर्ता लिँदैन भन्नु उहाँ को हो ? फिर्ता लिने दिने कुरा उहाँले भनेर हुँदैन । संसद विघटन भएको छैन भन्ने कुरा हो ।’
छलफलमा कानुनविज्ञ शम्भु थापा, अधिकांश बारएसोसिएशनका का पूर्व अध्यक्ष, बारका वर्तमान अध्यक्ष र संविधानसँग सम्बन्धितविज्ञ छलफलमा सामेल थिए । विडारीले भने , ‘अध्यक्ष प्रचण्डले संसद विघटन भएको छैन । यो गैर संवैधानिक हो भनेर हामी भनिरहको छौँ भन्नुभयो ।
उनले सांसदमाथि पनि प्रश्न उठाए । ‘संविधानमा नभएको कुरा गरौँ भन्दा पत्याइदिने कस्तो ? सांसदहरुले संसद विघटन भएछ है भन्ने ? अब संसदको लोगो लगाउने, संसदमा आउने, संसद अधिवेशनको माग राष्ट्रपति समक्ष गर्ने र भएन भने थप कार्यक्रममा जानुपर्छ । सांसदहरु नै अदालत जानुहुन्छ । कति गइसकेका छन्,’ उनको भाइ थियो ।
Previous: प्रचण्ड-नेपाललाई अपराधी भन्दै जेल हाल्ने चेतावनी
Next: विघटन भएको संसद पुनस्र्थापना हुन्छ : योगेश भट्टराई